निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
बेन Godfrey बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
सबैबेल्जियम फुटबल खेलाडीहरूक्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरूचेक गणराज्य फुटबल खेलाडीहरूडेनिश फुटबल खेलाडीहरूडच फुटबल खेलाडीहरूफ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरूजर्मन फुटबल खेलाडीहरूइटालियन फुटबल खेलाडीहरूनर्वेजियन फुटबल खेलाडीहरूपोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरूस्पेनिश फुटबल खेलाडीहरूस्विस फुटबल खेलाडीहरू
जोशुआ Zirkzee बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Jule kounde बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Leandro Trossard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जोश माजा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
फ्रैंक केसी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Yves Bissouma बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
बोले दीया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
येर्री मीना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
वेस्टन म्याकेनी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डीन स्मिथ बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दछ "निको". हाम्रो निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्म पुग्छ।
विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर बिल्डअप, प्रारम्भिक क्यामेरा जीवन, प्रसिद्धि कथाको बाटो, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, र जीवनशैली तथ्याङ्क आदिमा समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो क्षमताहरु थाहा छ जसले युरोपको शीर्ष क्लबहरुलाई कमजोर र घुँडा माग्ने गरी राखेको छ। यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले निकोलस पेपेको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
निकोलस पेपे 29th मई 1995 को उनको आमा मा जन्मेका थिए, र पिता पापा सेलेस्टेिन मान्टेस-ला-जोली मा मध्य-मध्य फ्रान्समा स्थित कम्युनिस्ट पार्टी। तल उहाँका आमाबाबुको तस्बिर हो; एक मेहनती पिता र सुन्दर आमा।
निकोलस पेपे आमाबाबु। क्रेडिट MondialSport.
निकोलस पेपे विनम्र शुरुआत र गरीब परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछ। यद्यपि उनी फ्रान्समा जन्मेका थिए, तर तिनका आमाबाबुहरू इभरीवासी आप्रवासी छन् जसले आइवरी कोस्टबाट फ्रान्स-एक्सएनएमक्ससमा फ्रान्सलाई राम्रो जीवन बिताउन खोजे।
पेरिसमा स्थापना भएपछि, निकोलस पेपेका अभिभावकहरूले उपलब्ध जागिर खोज्नु पर्‍यो। उनका बुबा सेलेस्टिनले जेल वार्डको काम लिनुभयो जबकि उहाँकी आमा घरधनी हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले निकोलाई जन्म दिए र उसलाई मान्टेस-ला-जोली कम्युनमा हुर्काए। पछि उनको प्रारम्भिक जीवनमा, निकोलस पेपेका बाबुआमाले पश्चिमी फ्रान्सको पोइटियर्समा बसाई सर्ने निर्णय गरे जुन उनका बुवाले त्यस क्षेत्रमा काम गरे।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- शिक्षित र क्यारियर बिल्डअप
पूर्वोत्तर पेरिसमा हुर्केका, कुनै खेलौना वा खेलहरू थिएनन्। सबै निकोलसले उनको फुटबल बल लात बनाउनु थियो। उसले जहिले पनि आफ्नो खुट्टामा बल मन पर्थ्यो। उसको शिक्षाको मुख्य आकर्षण ऊ he बर्षको उमेरमा आयो जब यो स्कूलमा उसको शिक्षकसँग उनको भेट भएको थियो जुन उनलाई सोध्यो… "निकोलस, तपाई जीवनमा के गर्न चाहानुहुन्छ?"
निकोलसले जवाफ दिए। "म ठूलो भएपछि पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्छु"। यस निर्णयले आफ्ना शिक्षकलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो जसले कहिल्यै निको बलियो बनाएको थियो र उनीहरूको लक्ष्य पुग्न कटिबद्ध थिए। यसरी उनले सानो केटालाई मदत गर्न निर्णय गरे।
१ 19985World को विश्वमा फ्रान्सको सफलतापछि फुटबलमा सहभागी भएका अफ्रिकी आप्रवासीहरूको ठूलो संख्या देखियो। निकोलस एक अपवाद थिएन। यद्यपि उहाँ आफ्नो शिक्षाको साथ जानुभयो र यसलाई आफ्नो प्रारम्भिक किशोरावस्थासम्म फुटबलको साथ मिश्रित गर्नुभयो। निको 9--XNUMX बर्ष उमेरका लागि कहिले पनि कुनै एकेडेमीको उत्पादन थिएन।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
निकोलस फुटबलको लागि उत्सुक रहेको उनले परीक्षणहरू पार गरेको र फ्रान्सेली स्थानीय क्लब, पोइटियर्स एफसी (अब स्टडे पोइटेभिन भनेर चिनिन्छ) का साथ भर्ना गरेको देखे। यस समयमा क्लबको वरिष्ठ टोली फ्रान्सेली पाँचौं-स्तर लिगमा खेले।
क्लबमा सामेल भएपछि, बल मा आफ्नो क्षमता संग सबै उडाए। युवा स्तरमा उनको प्रभावशाली प्रदर्शनको बावजुद, ठूला प्रतिष्ठानहरूबाट फुटबल स्काउट्स निकोलस पेपेको रgy्गीन शरीरको साथसाथै उनको मनोवृत्तिको बारेमा चिन्ताले अवरोध खडा भयो। त्यहाँ विचारहरू थिए कि निकोलस असंगत थियो वा केही परिस्थितिमा ऊ अल्छी थियो। यस तथ्यको कारण, कोही पनि उहाँसँग सम्पर्क गरेनन् वा उनको सराहना गरे।
फुटबल स्काउट्स र अन्य भर्तीहरू द्वारा व्यक्त गरिएका आरक्षणहरूको बावजुद, पिपले थाहा पाएको थियो कि उनले के चाहन्थे। पिटेरियर पहिलो टोलीमा नियमित रूपमा उनले बराबरी गरे पछि उनले आफ्नो रूप फर्काए।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
निकोलस पेपेको प्रदर्शन जारी रह्यो किनकि पोइटीयर्सलाई -3-१ ले जित्न सहयोग पुर्‍याउन उनी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए जुन २०१२-1२०१ season को सिजनमा निर्वासनबाट जोगियो। त्यस्तो सफलताले उनलाई पश्चिमी फ्रान्समा अवस्थित फुटबल क्लब एgers्गरहरूको साथ प्रस्ताव प्राप्त गर्‍यो।
पहिलो पटक प्रेम
यो निकोलस पेपेको सफलताको महत्वपूर्ण मोड हो। यो सबै एक धेरै सुन्दर दिन मा भयो। यस अनुसार ब्लीचररपोर्ट्स, यो खेल थियो खेल स्पोर्टिङ निर्देशक लुइस क्याम्पसले खेल खेल्न न्युक्लसलाई देखाए।
जबकि पूर्व रियल मैड्रिड स्काउट एक विरोधी टीम को खेलाडी हेर्न त्यहाँ थियो। तथापि, त्यो क्षणदेखि उनले पेपेलाई देखे, ऊसँग अरू कुनै फुटबल खेलाडीहरूका लागि आँखा थियो, आफ्नो लक्ष्य पनि थिएन जसलाई उनले स्काउटमा आएका थिए। यो "पहिलो नजरमा प्रेम " पिपाले उत्कृष्ट प्रतिभाशाली 82-मिनेट शानदार तुल्यकारकलाई बराबरीमा पराजित गरे।
“म उनलाई चाँडै नै माया गर्न थालें,” क्याम्पसले फ्रान्स फुटबल वेबसाइटलाई एक साक्षात्कारमा भने। पर्याप्त Pepe हेर्न पछि, तिनले लिली नयाँ मालिकलाई फ्रांसीसी-इभोरियन तारा खरीद गर्न निर्णय गरे।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
निकोलस पेपे जून २०१ 21 को २१ तारिखमा लिलीमा सामेल भए। क्लबमा सम्मिलित भएको केहि महिनाहरू, उनी क्लबको व्यवस्थापनले कठोर कायाकल्प प्रक्रियाको हिस्सा बने। ब्रेकमा उनको अनुहार चर्को गतिले लिललाई युरोपको सबैभन्दा विनाशकारी काउन्टर-अट्याकिंग टोलीमा परिणत गर्‍यो।
साथै उनको सुन्दर लक्ष्यहरू, पिपको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि उनी युरोपेली महाद्वीपका सबैभन्दा उत्तम लक्ष्य सिर्जनाकर्ता हुन्।
बिना असम्भव, यो पहिलो पटक हो ईडन हजर्ड २०१२ मा चेल्सीको लागि प्रस्थान गरियो कि लिल विश्व फुटबलको सब भन्दा रमाईलो खेलाडी मध्ये एक दावी गर्न सक्छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
निकोको प्रसिद्धिमा बृद्धि संग, सबैको ओठमा प्रश्न छ ... उनको प्रेमिका वा WAG को हो ?. निकोको आफ्नो सुन्दर लुकलगायत उनका मनमोहक गुणहरू छन् कि त्यसले महिलाहरूलाई मायालु दाखको बोट बनाउँदैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन।
निकोलस पेपेको प्रेमिका को हो?
तथापि, निको को सम्भावना छुपा रोमान्स एक छ जसले सार्वजनिक आँखा को जांच देखि बचछन किनकि उनको प्रेम जीवन निजी र संभवतः नाटक-मुक्त हो। लेखनको समयमा, निकोलस आफ्नो क्यारियरमा फोकस गर्न मनपर्छ र आफ्नो निजी जीवनमा कुनै पनि रोशनीबाट बचाउन खोजेको छ।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
निकोलस पेपेको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरू गर्दै, उहाँ कसैलाई चाँडै भरिएको व्यक्तित्वको साथ हुनुहुन्छ। Pepe सजीनीय छ, संवाद र सधैं साथीहरूको साथ मजा गर्न तयार छ। तथापि, त्यहाँ कहिलेकाहीं गम्भीर र विचारशील हुन्छ। यी क्षणहरू उहाँका भविष्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्।
अन्तमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा, Pepe एक स्थायी भावना संग कोही हुनुहुन्छ कि सबै कुराको लागी पर्याप्त समय छैन।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
निकोको सफलताको मुख्य कुञ्जी उसको ख्याल राख्ने अभिभावक र परिवारका सदस्यहरू हुन्। उदाहरणका लागि उनका बुबाले आफ्नो छोराको राम्रो भविष्यको लागि सबै त्याग गरे।
निकोलस पेपे र उनको बुबा। क्रेडिट MondialSport.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… निकोलसका बुबा, सेलेस्टाइन पेपे एक पटक फुटबलर थिए जसले एक प्रोफेशनल बन्नको लागि प्रबन्ध गरेनन्। पापा सेलेस्टिनले आफ्नो छोरा निकोलस मार्फत प्रोक्सीमा फुटबलर हुने निर्णय गरे। यो क्षण थियो जब उसले आफ्नो जेल कारागारको लागि आफ्नो जेल सुपरइजरलाई काममा राख्ने निर्णय गर्‍यो। सेलेस्टिनले काम गरे र छोराको साथ प्रशिक्षण लिन समय निकाले। उनी आफ्नो छोराको नजिक रहनको लागि फुटबल शिक्षाको रूपमा लाइसेन्स पाउँथे।
आज, निकोलस पेपेका अभिभावकहरू उनको परिवारमा हुने फाइदाहरूका लागि उपस्थित छन्। उसको सोशल मिडिया खाताका अनुसार ऊ आफ्नो आमासँग राम्रो सम्बन्ध भएको देखिन्छ।
निकोलस पेपे र उनकी आमा। आईजी लाई क्रेडिट
पेपे आफ्ना आमा बुबाको साथ एक्लै हुर्किएन। उनीका भाई-बहिनीहरू (जसमध्ये एक क्वामे पेपे हो) र परिवारका अन्य करीव सदस्यहरू पनि छन्। पेपेको आफ्नो आमाबाबु सहज छन् सुनिश्चित गर्न भक्ति र सामाग्री Atletico मैड्रिड आफ्नो प्रतिबद्धताको जस्तो छ।
निकोलस पेपे, उनको आमा र भाइबहिनीहरू। आईजी लाई क्रेडिट
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- LifeStyle तथ्यहरू
अनुसार स्थानान्तरणमार्केटनिकोलस पेपे current 36 मिलियन यूरोको बजार हो। यो अनुहार निश्चित रूप मा उसलाई एक करोडपति फुटबलर बनाउँछ। यो तथ्य, तथापि, एक अत्यन्त ग्लैमरस जीवन शैली मा transcend छैन।
निकोलस पेपे उनको फुटबल धन को प्रबंधन को बारे मा स्मार्ट हो। यो पागलपन जस्तो बिताउँदैन, वा आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्दैन।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
निकोलस पेपे कस्तो धर्म हो? निकोलस एक मुस्लिम फुटबलर हो, जसले शैलीमा आफ्नो धर्म प्रदर्शन गर्न मनपर्छ। उहाँ युनाइटेड अरब अमीरातमा दुबई रेगिस्तान भ्रमण गर्न मन पराउनुहुन्छ।
सँगी हमलावर जोनाथन बाम्बा र जोनाथन इकोोनसँग पेपेको अन-पिच सम्बन्धले त्रिकको उपनाम कमाएको छ “Bip Bip"। तपाईंलाई थाहा छ?… यो उपनाम Looney Tunes कार्टून श्रृंखलाबाट रोड रनरको लागि फ्रांसीसी नाम हो।
निको केन्द्रीय स्ट्राइकरको अपरिचित भूमिकाको सट्टा विङ्बाट अप्ठ्यारो गर्छन।
निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनौल्ड जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
कृपया तल खोज्नुहोस्, यो प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश। दयालु भ्रमण र सदस्यता लिनुहोस् हाम्रो YouTube च्यानल थप भिडियोहरूको लागि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो निकोलस पेपे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
शस्त्रागार फुटबल डायरी
लिल ओएससी फुटबल डेरी
मार्टिन Odegaard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
Emiliano Martinez बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Boubakary Soumare बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
फ्रेडी Ljungberg बचपन कहानी अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 29
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 24
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 13
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 16
परिमार्जित मिति: फेब्रुअरी १२, २०१
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 26